Ciidamada AMISOM oo Dad Rayid ah kulaayey Magaalada marka – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose, ayaa sheegaya in ciidamada Amisom Magaaladaasi ay ku dileen mar kale shacab ku noolaa Magaaladaasi.
Dilkaan oo ahaa mid bareer ah ayaa ciidamada Amisom waxaa la sheegay inay xaafadaha Magaalada Marka ugu galeen dadka ay dileen oo tiradooda lagu sheegay ilaa lix ruux oo ay ku jiraan dad isku qoys ahaa.
Ciidamada Amisom ayaa la sheegayaa inay galeen xaafado ka mid ah Xaafadaha Ruusiya ee Magaalada Marka, kadibna ay toogasho kula dhaqaaqeen qaar ka mid ah dadkii xaafadaasi ku noolaa, dadka ay dileen ciidanka Amisom waxaa ka mid ahaa Aabe iyo caruurtiisa oo gurigiisa ay ku dhex dileen.
Sababta ka dambeysay dilkaan ciidamada Amisom ay kula kaceen qaar ka mid ah dadkii Magaalada Marka ku noolaa, ayaa la sheegayaa inay tahay in ciidamada Amisom shalay galab qarax lagula eegtay Magaalada Marka, taasina ay tahay sababta xalay ay u faafeen oo ay dadka u laayeen.
Qof ku sugan Magaalada Marka ayaa sheegaya in ciidamada Amisom dhibaatadaan ay shacabka u geysteen ay aheyd mid ay u bareereen, islamarkaana aysan jirin cid ka hor tageysa ciidanka Amisom dhibaatada dadka ay u geysanayaan.
Bishaan gudaheeda ayeey ahayd markii sidaan oo kale askar ka mid ah Amisom ay dad shacab ah ku dileen magaalada Marka, inkastoo ay falkaasi dafireen.